porn ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကိုဘယ်လို | အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ: မေတ္တာသည်လိင်နှင့်အင်တာနက်
ပင်မစာမျက်နှာ porn ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ကမ္ဘာ့ကျယ်ပြန့်ယောက်ျားတွေအတော်များများဟာထောင်ပေါင်းများစွာသော porn ဖြတ်ထံမှအကျိုးအမြတ်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုလုပ်ဖို့?
ဒုတိယအချက်အသငျသညျကိုရပ်တန့်ဖို့နည်းလမ်းရှာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကအားလုံးသင့်ရဲ့ porn တွေကိုဖယ်ရှားဖို့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကထောက်ပံ့သောလင့်များကိုချိုးဖျက်ဖို့
ညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းသည်လူတိုင်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောခရီးတစ်ခုဖြစ်သည် ဦး နှောက်တိုင်းသည်ထူးခြားသည် ဖြစ်၍ ထို့ကြောင့်ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းသည်တစ် ဦး ချင်းစီဖြစ်သည်။ အချို့ကခက်ခဲစေသည်၊ အချို့ကမူအခက်အခဲများစွာမရှိပဲရပ်တန့်ရန်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
ဤအပိုင်းကိုအတွက်ဆုကြေး Foundation မှအချို့သော tools တွေကိုမိတ်ဆက်နှင့် compulsive အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏ချုပ်ကိုင်ထားရာမှလွတ်မြောက်ရန်ခွန်အားနှင့်ပြဌာန်းခွင့်ကိုရှာဖွေ, သင်, သို့မဟုတ်သင်အဘို့ဂရုစိုက်တစ်စုံတစ်ဦးကဖွင့်ဖို့ချဉ်းကပ်။ ကျနော်တို့က start ကနေ finish ကိုမှအပြည့်အဝဖြတ် porn ခရီးကိုဖုံးလွှမ်း။ တစ်ဦးညစ်ညမ်း-အခမဲ့အနာဂတ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အစားအမှန်တကယ်မိတ်ဖက်အတူကျေနပ်စရာချစ်ခြင်းမေတ္တာဘဝရှာဖွေတာအတွက်ကံကောင်းပါစေ။